Aviadev-Ravinala Airports: fotoan-dehibe ho an’ny fizahantany | NewsMada
Aviadev-Ravinala Airports: fotoan-dehibe ho an’ny fizahantany
Hisokatra tsy ho ela ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato. Hampitombo ny kaompania vahiny hiasa aty Madagasikara ny fisiany, ary anisan’ny fotoana iray hampivelatra ny fifandraisana amin’ny atsy Afrika ny hetsika Aviadev, hatao eto Antananarivo.
Hatao ny 3 hatramin’ny 5 mey ho avy izao eto Antananarivo ny hetsika iraisam-pirenena mikasika ny zotra anabakabaka, karakarain’ny Aviation development confrence (Aviadev). Miara-miombon’antoka aminy ny Ravinala Airports sy ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro (MTTM).
Madiva ho vita tanteraka ny seranam- piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato, ary hisokatra amin’ny fiandohan’ny volana avrily 2020. Nambaran’ny tale jeneraly (DG) ny Ravinala Airports, Patrick Collard, fa fotoan-dehibe ho an’i Madagasikara, ny hetsika Aviadev hampiroboroboana ny zotra anabakabaka sy ny fizahantany ny fananana an’ity fotodrafitrasa maoderina sady lehibe ity.
Hampitombo ny fampiasam-bola
Miisa 25 ny kaompania vahiny sy eto an-toerana vonona handray anjara amin’ny Aviadev 2020. Nambaran’ny filoha tale jeneralin’ny Aviadev Afrika, i John Howell, fa hanatsara ny fifandraisan’ireo mpisehatra amin’ny lafiny fitaterana anabakabaka aty Afrika ity fotoana ity. Hampiroborobo ny zotra anabakabaka, hampandroso ity sehatra ity koa sady hampanaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Hitombo ny mpampiasa vola toy ny fanorenana fiantranoana, toraka izany koa ny mpizahatany, hivelatra ny sehatry ny fandraharahana amin’ny zotra anabakabaka sy ny fizahantany, sns. Mitentina 350.000 euros ny fampiasam-bolan’ny Ravinala Airports amin’ity Aviadev hatao eto amintsika ity, miampy ny fanohanan’ireo mpiara-miombon’antoka sy ny mpanohana samihafa, toy ny minisitera, ny Banky iraisam-pirenena, sns. Tsiahivina fa natao tany Afrika Atsimo ny Aviadev andiany taona 2019.
Ilaina ny fisokafan’ny habakabaka
Nanamafy ny DG-n’ny Ravinala, i Patrick Collard, fa tombondahiny lehibe ho an’ny Ravinala Airports io fotoana io, hampitomboany ny mpiara-miombon’antoka aminy, toy ireo kaompania vahiny, hampiasa ny seranam-piaramanidina Ivato. “Ilaina mihitsy ny fisokafan’ny lanitr’i Madagasikara, noho izany, satria fomba iray hanatrarana ny mpizahatany miisa 500.000 amin’ny taona 2023 izany”, hoy ihany izy.
Nanamafy izany ny talen’ny fitaterana anabakabaka ao amin’ny MTTM, Rtoa Ralalarisoa Saholiarisoa, fa ao anatin’ny vinan’ny minisitera ny hanalalahana ny lanitr’i Madagasikara, ny
fampitomboana ny fifandraisana amin’ny any ivelany. Eo koa ny fanavaozana na fanokafana seranam-piramanidina vaovao, toy ny any Bekopaka sy Ranohira, ohatra, sy ny fananganana hotely lehibe.